UGervasio Posadas. «Ndiyabathanda abalinganiswa abagcwele umahluko» | Uncwadi lwangoku
UGervasio Posadas. "Ndiyabathanda abalinganiswa abagcwele umahluko"
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Ukufota: Iwebhusayithi ka (c) Gervasio Posadas
UGervasio Posadas inoveli entsha. Umbhali wase-Uruguay upapashe kule nyanga Umrhwebi wokufa, Ibali elibekwe eMonte Carlo phakathi kweemfazwe kwaye lisekwe kwiziganeko zokwenyani, elesibini linenkanyezi nentatheli uJosé Ortega. Namhlanje sinike oku udliwano ndlebe apho esixelela kancinci ngayo yonke into. Imuchas Gracias ngexesha lakho nobubele.
1 UGervasio Posadas
2 Udliwanondlebe noGervasio Posadas
Wazalwa ngo-1962 Uruguay kwaye, ngaphambi kokuba azinikele kuncwadi, wasebenza kwezinye zeenkampani eziphambili ze ukupapashwa. Ungumbhali weskripthi kwaye uyasebenzisana kwimidiya eyahlukeneyo ukongeza ekubeni ngu-blogger kwi IHotff Post. Ikwakhokelela kumasifundisane wokubhala ngobuchule kwi-Intanethi Ndifuna ukubhala.com nodadewabo UCarmen Posadas.
Ityala ngenoveli Imfihlelo yegazpacho, Waqhubeka no Namhlanje i-caviar, ngomso isardadi. Emva koko beza Impindezelo imnandi kwaye ayikwenzi utyebe y Ingqondo kaHitler, I-adventure yokuqala yentatheli uJosé Ortega.
Udliwanondlebe noGervasio Posadas
IGERVASIO POSADAS: Incwadi yokuqala endiyifundileyo Iimpawu zikaGuillermo. Ibali lokuqala lalineminyaka emihlanu okanye emithandathu ubudala, a udidi malunga nomnenga kunye nesardadi.
GP: Ndicinga ukuba ibiyiyo BayaphilanguPiers Paul Reed. Amakhwenkwe awonzakeleyo kwinqwelomoya ayevela kwiqela lam lombhoxo lesikolo sam.
GP: Ndicinga ukuba ababhali endibathandayo kakhulu bakunye nabo Ukunyoba kunye kunye UEduardo Mendoza. Ndiyathanda ukubona ukuba balakha njani ibali ngaphandle kwesidingo samagama amakhulu. Kwakhona, kunjalo, uGabriel UGarcia Marquez ngengcinga yakho kwaye IBorges, ukukwazi kwakhe ukuba ngumfundi ngaphandle kokudinwa.
GP: Cyrano de Bergerac. Ndiyabathanda abalinganiswa abagcwele umahluko.
GP: Ndifunde nakweyiphi na imeko kunye neemeko. Ukuze ndi ubhale iyafuneka ukuthula kunye nomculo omnandi.
GP: Ndiyathanda kakhulu bhala kwiihotele okanye kwiihostele. Ziindawo ezinoncwadi kakhulu, ezizele ngamabali. Ndibhalile kwii-monastic inn kunye ne iholo kwiihotele ezininzi. Kuphela kwento endiyenzayo kumgaqo woxolo endizibeka kuwo.
AL: Nguwuphi umbhali okanye incwadi echaphazele umsebenzi wakho njengombhali?
GP: Ngaphandle kweDelibes kunye neMendoza, esele ndikhankanyile ngaphambili, ndiyayithanda Isiqhulo sesiNgesi kubabhali bathanda U-Kingsley Amis, uDavid Lodge okanye uNick Hornby.
GP: Ndithanda kakhulu ifayile ye- Inoveli yoncwadi kunye nembali, ingakumbi inkulungwane yamashumi amabini. Ndiyithandile mva nje Abantu baseYurophu, ngu-Orlando Figes.
GP: Ndigqibile Intliziyo yenja ngu-Mikhail Bulgakov. ndingu uthanda kakhulu uncwadi lwaseRussia ngalo lonke ixesha, ngakumbi ukusuka UDostoevsky.
Ngokubhala, andiqali nantoni na entsha de kuphume inoveli yamandulo. Umrhwebi wokufa sele iphumile ngoSeptemba kwaye sele Ndijika iimbono ezimbalwa.
GP: Ngu Ukwanda kukhuphiswano kunye nokugxila kwinani elincinci leetayitile.
Ngethamsanqa, Amaqonga okupapasha desktop zinika ukufikelela kubabhali abaninzi abatsha kwaye zivumela abafundi ukuba bafumane amazwi amatsha.
GP: Ndicinga ukuba kunjalo kwangoko kancinci ukuvavanya ifuthe lale ngxaki. Into enomdla kukuba uninzi lwababhali endibaziyo baziva ngathi bathintelwe kule meko. Ekuphela kwento elungileyo endiyibonayo ngalo mzuzu yile isifundisa indlela yokuphila imihla ngemihla ngaphandle kokwenza izicwangciso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UGervasio Posadas. "Ndiyabathanda abalinganiswa abagcwele umahluko"